Wararka Maanta: Arbaco, May 15, 2019-Hay'adda Warfaa Foundation oo degmada Galdogob ka fulisay mashruuc dhallinyarada ka caawinaya is-dhexgalka
Tartanka ayaa ujeedkiisu tahay is-dhexgalka dhallinyarada ka hortagga tahriibka , mukhaadaraadka, qabyaaladda iyo wax walba oo dhallinyarada kala gayn kara.
Dhallinyarada ka qeybgalaya tartanka ayaa u mahadceliyay Xildhibaan Sadiiq Xersi Warfaa ahna wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo hay'adda Warfaa Foundation .
"Wasiir Sadiiq Warfaa , waxaan uga mahadcelinaya sida uu uga warhayo bulshadiisa, barnaamijkan waa mid muhiim u ah dhallinyarada,waxaana lagu soo beegay xilli ku habboon". ayuu yiri mid ka mid ah dhallinyarada ka qeybgala tartanka.
Tartanka waxaa ka qeybgalaya illaa 16 kooxood ,labadii kooxood ee ugu horreysay isku aadka tartanka ayaa xalay lagu furay.